“Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary indro Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo. - ppt download
Published byTatienne Poulain Modified over 2 years ago
Presentation on theme: "“Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary indro Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo."— Presentation transcript:
1 “Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary indro Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao.” (Mat. 28:20) Vol. 1 Andro farany ho an’ny HAFATR’I J ESOSY
3 NY FIKATONAN’NY VARAVARAM- PAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA SY NY FAHOTANA TSY AZO AVELA NY FIKATONAN’NY VARAVARAM- PAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA SY NY FAHOTANA TSY AZO AVELA
4 Faminaniana arahana fampiharana ataon’ny tena manokana. Ahoana no ahafantaranao hoe nanao heloka tsy azo avela intsony ianao?
7 Matio 12:31 Hahazo famelan-keloka ny olona amin’ny ota sy fitenenan-dratsy samy hafa rehetra; fa tsy hahazo famelan- keloka ny olona amin’ny fitenenan- dratsy ny Fanahy Masina.” Faly aho satria miteny i Jesosy hoe ho voavela avokoa “ny fahotana rehetra” “Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe:
8 Genesisy 1:1, 2, 26 Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany… ary ny Fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano... “Ary tamin’ny voalohany
9 “Andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika…” Genesisy 1:1, 2, 26
10 1 Jaona 5:7 “Fa misy telo izay manambara, dia ny Fanahy, ny rano, ary ny rà; ary mifanaraka tsara izy telo.”
11 “Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izahao toetra ny fanahy, na avy amin’Andriamanitra ireny na tsia.” 1 Jaona 4:1
13 1 Korintiana 14:33, 40 fa tompon’ny fiadanana. Araka ny fanaon’ny fiangonan’ny olona masina rehetra … Aoka ny zavatra rehetra atao amin’ny fahamendrehana sy ny filaminana.” “Fa Andriamanitra tsy tompon’ny fikotranana,
14 Matio 3:16, 17 dia niakatra avy teo amin’ny rano niaraka tamin’izay Izy; ary indro nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny Fanahin’Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala “Ary raha vao natao batisa i Jesosy
15 Ary injao nisy feo avy tany an- danitra nanao hoe: Ity no zanako malalako Izay sitrako.” … ka nankeo amboniny. Matio 3:16, 17
16 Asa 2:2-4 “Ary nisy feo tonga tampoka avy atany an- danitra, toy ny rivotra mahery mifofofofo, …
17 izany. Ary samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra…” Ary nisy lela maro mitarehin’afo niseho taminy, izay nizarazara; ary nipetraka tamin’izy rehetra isan’olona Asa 2:2-4
19 Efesiana 4:8, 11, 12 Ary Izy no nanome ny sasany ho Apostoly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry… “...Raha niakatra ho any amin’ny avo Izy...
20 … sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina ho amin’ny asan’ny fanompoana amin’ny fiangonana, ho amin’ny fampandrosoana ny tenan’i Kristy.” Efesiana 4:8, 11, 12
21 1 Korintiana 12:28 “Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin’ny fiangonana, voalohany Apostoly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana, dia fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny samy hafa tsy fantatra.”
22 Asa 2:6, 8 “...fa samy nahare azy ireo niteny tamin’ny fiteniny avy izy rehetra.” “Koa ahoana no andrenesantsika amin’ny fitenintsika avy izay nahabe antsika?”
24 “Andriamanitra tsy tompon’ny fikotranana.”
27 Asa 5:32 ary ny Fanahy Masina koa, Izay efa nomen’Andriamanitra ny manaiky Azy.” “Ary izahay dia vavolombelon’izany zavatra izany,
28 Jaona 14:15-17 dia hitandrina ny didiko. Ary Izaho hangataka amin’ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny Fanahin’ny fahamarinana …” “Raha tia Ahy ianareo,
29 “ Tandremo ny didiko,” “Dia hanome ny Fanahy Masina Aho.”
30 Jaona 14:21 mitandrina izany, dia izy no tia Ahy; ary izay tia Ahy no ho tian’ny Raiko, ary Izaho ho tia azy ka hiseho aminy.” “Izay manana ny didiko ka
31 1 Jaona 5:3 “Fa izao no fitiavana an’Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny, sady tsy mavesatra ny didiny.”
32 “Izay manao hoe: Fantatro Izy, nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny.” 1 Jaona 2:4
33 Romana 8:7 “Satria fandrafiana an’Andriamanitra ny fihevitry ny nofo; fa tsy manaiky ny lalàn’Andriamanitra, sady tsy hainy akory izany.”
35 Jaona 16:13 “Fa raha tong any Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo ho amin’ny marina rehetra…”
36 Jaona 9:28, 29 “...izahay mpianatr’i Mosesy. Izahay mahalala fa Mosesy no nitenenan’Andriamanitra; fa ny amin’izany Lehilahy izany, dia tsy fantatray izay nihaviany.”
38 Asa 17:30 “Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron’ny tsi- fahalalana...”
39 Jakoba 4:17 “Koa izay mahalala hanao soa nefa tsy manao, dia heloka ho azy izany.”
40 Jaona 14:26 “Fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina Izay hirahin’ny Ray amin’ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo.”
41 Matio 28:19, 20 “Koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra…sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo.”
42 Jaona 16:7, 8 dia tsy ho avy aminareo ny Mpananatra; fa raha handeha Aho, dia hirahiko ho aminareo Izy. Ary raha tonga Izy, … “...fa raha tsy hiala Aho,
43 dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana.” Jaona 16:7, 8
45 Asa 24:25 “...dia raiki-tahotra Feliksa ka namaly hoe: Mandehana angaloha; fa raha malalaka, dia hampaka anao indray aho.”
47 Hebreo 2:3 “Hataontsika ahoana no fandositra, raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika...”
48 Jaona 17:17 “Manamasìna azy amin’ny fahamarinana; ny teninao no fahamarinana.”
50 2 Petera 1:21 “Fa tsy nisy faminaniana avy tamin’ny sitrapon’ny olona tany aloha rehetra; fa avy tamin’Andriamanitra no nitenenan’ny olona araka izay nitondran’ny Fanahy Masina azy.”
52 Hebreo 4:12 “Fa velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin’ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, …
53 ...ary ny tonona sy ny tsoka, ka mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan’ny fo.” Hebreo 4:12
55 2 Tesaloniana 2:11, 12 “Koa izany no ampanateran’Andriamanitra fiàsan’ny fahadisoan-kevitra aminy hinoany ny lainga,…
56 …mba hohelohina avokoa izay rehetra tsy mino ny marina, fa nankasitraka ny tsy marina.” 2 Tesaloniana 2:11, 12
57 Romana 8:14 “Fa izay tarihin’ny ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra.”
60 Genesisy 6:3 “Tsy hanapaka mandrakariva ao amin’ny olona ny Fanahiko...”
61 Jaona 6:44 “Tsy misy olona mahay manatona Ahy, raha tsy taomin’ny Ray Izay naniraka Ahy.”
62 Jakoba 2:19, 20 Andriamanitra; koa tsara izany ataonao izany, ny demonia koa mba mino izany ka dia mangovitra. Moa tsy fantatrao va ry olom-poana, fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa?” “Ianao manao fa iray ihany no
63 Isaia 30:21 ankavanana ianao, na mivily ho amin’ny ankavia, ny sofinao dia handre teny ao ivohonao manao hoe: Ity no làlana ka andehano.” “Fa na mivily ho amin’ny
66 Jaona 6:37 “...Izay rehetra omen’ny Raiko Ahy no hanatona Ahy; ary izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy.”
69 Salamo 51:10, 11 ary havaozy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao; ary aza manaisotra ny Fanahinao Masina amiko.” “Amorony fo madio aho, Andriamanitra o;
71 Ohabolana 16:25 “Misy làlana ataon’ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin’ny fahafatesana no iafarany.”
73 Matio 7:22, 23 tsy efa naminany tamin’ny anaranao va izahay? Ary tsy efa namoaka demonia tamin’ny anaranao va izahay,... “Maro no hanao amiko amin’izany andro izany hoe: Tompoko, Tompoko,
74 Ary dia hambarako aminy marimarina hoe: Tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay hatrizay; mialà amiko, ianareo mpanao meloka!’ …ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin’ny anaranao va izahay? Matio 7:22, 23
Download ppt "“Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary indro Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo."
Ppt on cross border merger and acquisition Ppt on human resources planning Ppt on data abstraction in java Ppt on interest rate risk Download ppt on management of natural resources class 10 Ppt on art of living Ppt on regional rural banks Ppt on insurance companies in india Free ppt on forest society and colonialism notes Ppt on septic abortion